Warehouse spaces For Sale and For Rent in Central Region
Uluhlu lweeNtengiso zePropathi: Iimpahla zentengiso Iindawo zokugcina amanzi Ummandla oMbindi
Ngubani, akukho luhlu lokukhangela lweemowudi yokukhangela. Zama uPhendlo lukaGoogle:
A igumbi lokugcina izinto sisakhiwo sorhwebo sokugcina iimpahla. Iindawo zokugcina iimpahla zisetyenziswa ngabavelisi, abangenisi, abathumela ngaphandle, abathengisi, amashishini ezothutho, amasiko, njl.njl. Bahlala bephethe ii-docks ukulayisha nokuthumela iimpahla kwiilori. Ngamanye amaxesha amagumbi okugcina iimpahla ayilelwa ukulayisha nokuthumela iimpahla ngqo koololiwe, kwizikhululo zeenqwelo moya, okanye kwizitishi. Bahlala benamakhreyithi kunye neefolokhwe zeempahla ezihambayo, ezihlala zibekwa kwiIPO ezisemgangathweni ezilayishwe kwi-pallet racks. Izinto ezigciniweyo zinokubandakanya nayiphi na impahla eluhlaza, izinto zokupakisha, izinto ezingasasebenziyo, okanye izinto ezigqityiweyo ezinxulumene nezolimo, ukuvelisa kunye nemveliso. KwisiNgesi saseIndiya indawo yokugcina izinto ingabizwa ngokuba yitown.
I-Purton yidolophana enkulu kunye neparish yendawo e-Wiltshire, eNgilani, malunga ne-4 yeekhilomitha (i-6 km) emantla ntshona kwiziko le-Swindon. I-parish ibandakanya ilali yasePurton Stoke kunye neehhedi zaseBentham, iHayes Knoll, iPurton eqhelekileyo, iTropiki, iFox neWidham. Isitshixo soMlambo, isizwana seThames, sinqumka eli paranda kufutshane nePurton Stoke. Idolophana yindawo yokuhlala esecaleni kwendlela yakudala phakathi kweedolophu zembali yeCricklade 4 miles (6.4 km) emantla kunye neRoyal Wootton Bassett 3 yeekhilomitha (i-4.8 km) emazantsi. I-Purton isendleleni encinci i-1 mile (i-1.6 km) ukusuka kwi-B4553 kunye ne-3 yeekhilomitha (i-4.8 km) ukusuka kumda we-16 we-M4. Ilali isecaleni kwenduli, enemibono ngaphesheya kweCricklade kunye nethafa lomfula iThames. Kufuphi, ihlathi laseBradon linabela kwiMinety kwintshona. Izinto ezilalini zibandakanya iivenkile ezininzi, iofisi engaphantsi, ilayibrari, izindlu zikawonkewonke kunye neeresityu, ukuziqhelanisa noGP, ugqirha wamazinyo kunye nonyango lwezamayeza. Ilali ikhule kangangokuba aba bathengisi bayo bonke abaxinekanga kwiziko elinye. Iivenkile ezimbalwa zisendleleni eyindawo ekudibaneni kunye nePavenhill, kwaye ezimbalwa zijikeleze umda wendlela ecaleni kweholo yelali. Icawe yase-England ye-parish yase-Saint Mary ye-Virtual ayiqhelekanga ngokuba ne-tower ende nganye, enye yayo inesiporho. Yenye yeecawa ezintathu zenkonzo e-engilane eNgilane kunye nespire kunye nenye inqaba. Ezinye ezimbini zikwi-Wanborough, eWiltshire, nase-Ormskirk, eLancashire.